Ny fandotoana rano fisotro no làlana voalohany ahitan'ny otrikaretina ny fako amin'ny fako sy ny olona. Miharihary amin'ireo koa ny olona otrikaretina amin'ny alàlan'ny tany, sakafo ambolena amin'ny tany maloto, hazan-dranomasina voajinja avy amin'ny rano voaloto, ary fandroana sy famerenana amin'ny rano maloto. Ny areti-mifindra vokatry ny fihanaky ny fako dia misy ny salmonella bakteria, giardia parasite ary hookworm, ankoatra ny hafa. Ny fiharihariana dia mety hiteraka aretina mitaiza ihany koa, toy ny aretin-koditra, ary aretin-koditra. ref
Famantarana fampitandremana fandotoana maloto eo amin'ny torapasika any San Diego County, Kalifornia. Sary © Brian Auer
Ny aretim-pivalanana, toy ny rotavirus, cholera, ary typhoid, no olana ara-pahasalamana lehibe mifandraika amin'ny fahalotoan'ny rano maloto, ka 1.6 tapitrisa no maty tamin'ny taona 2017. ref Ireo aretina ireo dia mety hiteraka tsy fahampian-drano mafy, tsy fanjarian-tsakafo ary fahatapahan-jaza amin'ny zaza, manimba ny fitomboany sy ny fivelaran'ny sain'izy ireo. ref Ny valiny dia mety hiteraka fahasarotana maharitra mandritra ny androm-piainana ary vokatra manimba ho an'ny vondrom-piarahamonina iray manontolo. Jereo ny fandalinana tranga avy amin'ny vohitra Bavu sy Namaqumaqua any Fiji amin'ny antsipiriany ny fampiharana ny rafitra fanadiovana mba hiatrehana ny valanaretina typhoid sy ireo fiantraikany hafa amin'ny fandotoana rano maloto.
Ny pathogens ao amin'ny oysters sy ny trondro hafa dia miteraka tranga 4 tapitrisa Hepatitis A sy E isan-taona, miaraka amina 40,000 maty ary tranga iray hafa 40,000 an'ny kilemaina maharitra ao amin'ny fahasimban'ny atiny maharitra. ref
Tamin'ny fanadihadiana vao haingana teny amin'ny morontsirak'i Myanmar, Littman sy ireo mpiara-miasa aminy (2020) ref namantatra ireo otrikaretina bakteria miisa 5,459 51 amin'ny tavy oyster, antsanga an-dranomasina ary ranomasina. Notaterin'izy ireo fa ny XNUMX% amin'ireo pathogens hita ao amin'ny santionan'ny oyster dia fantatra fa manimba ary misy ahiahy mipoitra amin'ny fahasalaman'ny olombelona.
Ho fanampin'ny aretin-kibo, misokatra amin'ny varavarankely vaovaoTandindomin-doza ny mpilomano tratry ny rano maloto ho an'ny aretin-tratra, sofina, maso ary hoditra, ary koa hépatite.
Ny fifandraisana amin'ny fako ataon'olombelona dia maneho fanamby maika indrindra amin'ny faritra an-dàlam-pandrosoana ary nahatonga ny fampandrosoana ny sehatry ny rano, fidiovana ary fidiovana (WASH).
Ny sehatry ny rano, fidiovana ary fidiovana (WASH) dia sehatra natokana ho an'ny serivisy fanadiovana ho fiarovana ny fahasalaman'ny olombelona. Ity asa ity dia misy ny fanatsarana ny fidirana sy ny kalitaon'ny rano fisotro, ny rafitra fanadiovana azo antoka sy mahomby ary ny fitondran-tena madio. Izy io dia mifantoka indrindra amin'ny fampandrosoana ireo faritra tsy misy fotodrafitrasa fanadiovana rano na fanadiovana.
Tsy fahampian'ny fidirana amin'ny fidiovana, isam-paritra ref
[tabilao id = 18 /]
Ny loto hafa amin'ny fako dia mampidi-doza amin'ny olombelona ihany koa, anisan'izany ny fatran'ny otrikaina avo. Ireo zavatra simika mampiahiahy (CEC) dia matetika tsy esorina amin'ny rano maloto mandritra ny fitsaboana ary miditra mora foana amin'ny tontolo an-dranomasina. Ny fiharihariana dia mety hitranga amin'ny alàlan'ny fihinanana hazan-dranomasina voaloto na fifandraisana mivantana amin'ireo fantsona kely anaty rano rehefa mandeha ny fotoana. Ohatra vitsivitsy amin'izany:
Ny metaly mavesatra dia mety manakana ny fiasan'ny vatana tsikera rehefa mihinana sy manangona. ref
Karenia brevis, ny dinoflagellate an-dranomasina izay miteraka fisondrotana mena, karazana voninkazo algoma manimba, dia mamokatra brevetoxins afaka mampidina rivotra. Ireo poizina ireo dia nampifandraisina tamin'ny fitomboan'ny fihenan'ny asma, ary ny fiakarana 40% amin'ny fidirana amin'ny efitrano fitsaboana maika ho an'ny aretin'ny gastrointestinal mandritra ny hetsika mena. ref
Ny nitrates amin'ny rano fisotro dia mety miteraka Methemoglobinemia amin'ny ankizy sy ny fihenan'ny neurotoxins ateraky ny voninkazo algna maintso manga dia mety hitarika soritr'aretin'i Alzheimer. ref Ny fikarohana natao tato ho ato dia nampifandray ny nitrates amin'ny rano fisotro amin'ny colon, ovarian, tiroida, voa, ary homamiadan'ny tatavia amin'ny olon-dehibe. ref Raha ny marina, fanadihadiana marobe no naneho fa ny fitomboan'ny mety ho voan'ny homamiadana dia misy nitrate amin'ny ambaratonga ambanin'ny fenitra amerikana misy faritra 10 isaky ny tapitrisa. ref Ny fanadihadiana danoà iray dia nitatitra ny fitomboan'ny mety ho voan'ny homamiadan'ny kôlônina miaraka amin'ny haavon'ny nitrate mihoatra ny 3.87 isaky ny tapitrisa. ref
Ny fandotoana avy amin'ny rano maloto dia tsy vitan'ny hoe mampiditra olana ara-pahasalamana fotsiny, fa manohintohina ny jono kosa izany, loharano iray tena ilaina amin'ny proteinina ho an'ny sakafo sy fivelomana, ary mandrahona ny haran-dranomasina, izay manome ihany koa ny sakafo, fiarovana ny fivelomana, fiarovana ny morontsiraka ary trano ho an'ny karazan-java-dehibe ilaina amin'ny vokatra ara-pitsaboana. ref
Fanoherana fanoherana ny mikraoba
Ny fitomboan'ny otrikaretina mahazaka antibiotika, na "superbugs", angamba no fiatraikany lehibe indrindra amin'ny fahasalaman'ny olombelona atrehantsika mifandraika amin'ny fahalotoan'ny rano maloto. Ny fanoherana ny antibiotika dia tompon'andraikitra amin'ny fahafatesan'ny olona 700,000 isan-taona, isa izay mitombo noho ny misokatra amin'ny varavarankely vaovaofitantanana antibiotika mahantra (izany hoe antibiotika be loatra), tsy fahampian'ny fanadiovana, tsy fahampian'ny fitsaboana rano maloto ary fanariana ny tontolo iainana. ref Ny superbugs dia avy amin'ny aretina tsaboina - matetika matetika - amin'ny antibiotika. Ireo antibiotika ireo dia manao azy ho rano maloto, izay afangaro amin'ny mikraoba. Ny antibiotika dia mamono mikraoba maro, raha ny mikraoba hafa kosa manana ny génétique hanoherana ny fatra antibiotika ambany, dia voafantina ary hitombo amin'ny habetsaky ny habetsany. Raha tsy voatsabo tsara dia miditra amin'ny tontolo iainana ireo superbugs vaovao ireo. Izy io dia lozisialy mampidi-doza amin'ny aretina, antibiotika, fahatapahana ary fampisehoana. Mihombo ny fahatsapana fa ny zavamaniry fitsaboana rano maloto dia toerana iankinan'ny superbugs. ref Ny fanatsarana ny fidiovana sy ny rano maloto dia singa iray lehibe manoloana ny loza mitatao amin'ny fahasalaman'ny olombelona.
Ny fihenan'ny fandotoana sy ny fihanaky ny superbugs dia mitondra soa ihany koa amin'ny fahasalaman'ny ranomasina. Miaraka amin'ny areti-mandringana COVID-19 dia tsy nankasitrahana velively ny maha-zava-dehibe ny fahasalamam-bahoaka na dia amin'ny toerana lavitra aza. Ny fanamby fandotoana rano maloto eto an-toerana na isam-paritra dia mety hiteraka krizy ara-pahasalamana manerantany. Taneja sy Sharma ref manorata ohatra tena tsara amin'ny hamafin'ity toe-javatra ity any India. Manerana ny firenena, nisy ny fampiasana antibiotika malemy sy maharary hanasitranana aretina maro. Ity fomba fanao ity dia nanjary iray amin'ireo taha ambony indrindra amin'ny fanoherana ireo mpiasan'ny mikraoba mikraoba ampiasaina amin'ny fitsaboana ny olona sy ny biby fihinana, ary ny iray amin'ireo fatran'ny mikraoba tsy mahazaka zava-mahadomelina anaty rano voajanahary. Fampitandremana ho an'ny sisa amin'ny vondrom-piarahamonina eran-tany ny valim-pikarohan'izy ireo, raha apetraka ankehitriny kosa ny drafi-pifehezana (fampihenana ny fampiasana antibiotika sy ny fandrarana ny fampiharana maloto rano maloto any an-tsaha) ho modely iray hanakanana ny olana.
Ny fahalotoana an-kalamanjana na toerana fanadiovana tsy azo antoka (tsy misy jiro na tsiambaratelo) dia miompana indrindra amin'ny vehivavy, miteraka fotoana iharan'ny herisetra na herisetra. Ny tsy fitoviana eo amin'ny lahy sy ny vavy vokatry ny fahadiovana tsy madio dia mitohy rehefa tsy mianatra intsony ny zazavavy mandritra ny fadimbolana na mandany fotoana be loatra amin'ny fitadiavana rano fisotro madio ny vehivavy. Ny fitsabahan'ny fahadiovana matetika dia mitaky fifandraisana amin'ny fako mandritra ny fanangonana sy ny fitsaboana ary ny fanamafisana izany fifandraisana izany dia ekena fa ilaina amin'ny fahasalamam-bahoaka.
Raha ny fakon'olombelona sy ny rano maloto notsaboina no mampidi-doza indrindra amin'ny fahasalaman'ny olombelona, ​​dia misy ihany koa ny loza ateraky ny rano maloto voatsabo. Fanariana ny biosolida mametraka ny mponina akaiky azy atahorana hidoka na hisotro otrikaretina azo avy amin'ny rivotra. ref
Ny fidiovana azo antoka dia nofaritan'ny Programme fanaraha-maso iraisana (JMP) toy ny rafitra miresaka ny serivisy serivisy fanadiovana iray manontolo. Ny fanadiovana madiodio dia misy fiheverana ny fako mihoatra ny fikojakojana eny an-toerana. Ny fifandraisana amin'ny fako ataon'olombelona mandritra ny fanangonana sy ny fitsaboana, na noho ny tsy fahampian'ny fanangonana sy ny fitsaboana, dia nanjary singa lehibe iray amin'ny fampiharana ny vahaolana fanadiovana ary ny fanalefahana io fifandraisana io dia ekena fa ilaina amin'ny fahasalaman'ny olombelona. Na dia eo aza ny fandrosoana, ny ankamaroan'ny mponina manerantany dia tsy manana fahazoana fanadiovana ampy hiarovana ny fahasalamam-bahoaka. Raha ny filazan'ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana (OMS), olona efa ho 6 amin'ny 10 no nanana fidirana amin'ny serivisy fitantanana fahadiovana azo antoka tamin'ny 2017. ref
[Caption id = "attachment_32788" hampifanaraka = "alignnone" width = "1230"] manokatra fisie IMAGE Fanaparitahana ny fidirana eran-tany amin'ny serivisy fanadiovana (sary havia) sy ny tohatra fanadiovana (sary ankavanana) ampiasain'ny JMP hanombanana ny fitsabahan'ny fahadiovana. Loharano: misokatra amin'ny varavarankely vaovaoIZA sy UNICEF